Real Madrid oo weyneysa Sergio Ramos hadii Gareth Bale soo laabto Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Real Madrid oo weyneysa Sergio Ramos hadii Gareth Bale soo laabto
Real Madrid oo weyneysa Sergio Ramos hadii Gareth Bale soo laabto
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay wajaheyso suurtagalnimada inaybeeca xortaah ku weyso Sergio Ramos xagaagan si ay u bixiso sanadka ka haray mushaharka Gareth Bale .
Dhaqaalaha kooxda reer Spain ayaa si weyn u saameeyay cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’, waxaana la fahamsan yahay in kabtanka kooxda Ramos uu diiday laba dalab kala duwan oo ka yimid Los Blancos madaama uusan diyaar u aheyn inuu aqbalo mushahar dhimis.
Sida laga soo xigtay AS , arrimaha maaliyadeed ee ka dhashay musiibada socota waxay ka dhigan tahay in kooxda Zinedine Zidane aysan awoodi karin inay daboosho mushaharka Ramos, iyo qandaraaska qaaliga ah ee Bernabeu, oo soconaya illaa Juun 2022, ayaa la micno ah in kooxda laga yaabo inaysan awoodi karin sii haysto kabtankooda.
Bale ayaa haatan amaah kula jooga kooxda Tottenham Hotspur , laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Wales ayaa ku dhibtooday inuu calaamadeeyo ku soo laabashadiisii ​​Premier League, waxaana uu u muuqdaa mid hubaal ah inuu xagaagan dib ugu laaban doono Madrid.
Warbixinta ayaa xustay in 31 jirka iyo Ramos ay yihiin labada qof ee ugu mushaharka badan Bernabeu dhanka mushaharka, kan horena waxaa la sheegayaa inuusan diyaar u ahayn inuu aqbalo dhimis uu ugu guuro meelo kale.
Ramos ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayaan kooxo dhowr ah ka hor inta uusan si xor ah ugu dhaqaaqin.
Previous articleQilaafkii Jose Mourinho iyo Pep guardila oo wili sii socda kadib guushii City.
Next articleZinedine Zidane oo albaabada ufurey shaqada tababarenimo ee Xulka France